Madaxwaynihii Hilibkiisa La Cuney!- Mid Ka Mid Ah Qisooyinka Dunida Ka Dhacay Kuwooda Ugu Layaabka Badan | FooreNews
Home Barnaamijo Madaxwaynihii Hilibkiisa La Cuney!- Mid Ka Mid Ah Qisooyinka Dunida Ka Dhacay Kuwooda Ugu Layaabka Badan
FoorenewsApr 09, 2018Barnaamijo, Nagu saabsan, Sheekooyin, Suugaan0
Rumayso ama ha rumaysan waxa ay tani ka mid tahay qisooyinka layaabka leh ee qaaraddan Afrika soo maray kuwooda ugu layaabka badan ee la xidhiidha dhinaca siyaasadda. “Markii la diley ka bacdi, ayaa jidhkiisii la moofeeyey oo waliba ay cuneen, kama tagin ilaa calooshiisa maahee. Haa, xitaa taliyihii baa hilibkii madaxwaynaha saxan ku ritey oo cuney” sidaa waxa yidhi Jackson Doe oo ay wada dhasheen Madaxweynihii hore ee waddanka Liberia Samuel Doe oo taariikhda la sheego in maydkiisa la solay inkasta oo aan la isku raacsanayn in la cunay hilibkiisa. Madaxweynihii hore ee macangaga ahaa ee dalka Liberia Samuel Doe waxa uu talada dalkiisa qabsadey isagoo laba xiddigle ah, wuxuuna afganbi dalka kagala wareegay madaxwaynihii xilligaas ee William R. Tolbert. Wuxuu ballan ku qaadey inuu dib usoo celin doono sumcaddii dalka, kala danbayntii iyo dhaqaalihii. Wuxuu maxkamadda ciidanka saaray madaxwaynihii uu xilka kala wareegey, dhowr bilood kadibna wuxuu ku toogtey meel fagaare ah, isagoo danbigiisu ahaa musuq iyo xalaaleysi hantida ummadda.
Toban sanadood oo uu ku jirey raaxo iyo qasriyo aad u waaweyn, waxaa dalka la wareegey ciidamo mucaarad ah oo uu hoggaaminayey Taliye Charles Taylor. Markiiba waxay la wareegeen dalka badankiis, isagiina waxay kusoo dhigeen gacanta, waxayna kusoo eedeeyeen dil madaxwayne iyo lunsi hanti qaran. 9-kii September 1990-kii ayaa lasoo saaray talafeshinnada caalamka isagoo la dilayo, hadalkiisii ugu danbeeyeyna wuxuu ahaa ” Ii kaadiya, waxbaan idiin sheegayaa. Ii kaadiya… Ii kaadiya waxbaan idiin sheegayaa” balse cidina uma kaadine waa la dilay.
Waxaa maydkiisa la mariyey jidadka iyadoo jidhkiisa ay ka maqnaayeen labada dhegood iyo far. Wixii intaa ka dambeeyeyna dib looma arag warbaahintana lagama soo dayn halka uu maydkiisu ku dambeeyey.
Dadka dalka Liberia illaa maanta waxay aaminsan yihiin, madaxwaynahaas la diley iney ciidanka mucaaradku jarjareen dabadeed dabka geliyeen ilaa uu ka bislaadey, taliye Charles Taylor ayaa la sheegay inuu amrey in la cuno isaguna bilaabey inuu maydkii cuno, ciidankiina dhammaantood sidaas ay ku dhammaysteen jidhkii madaxwaynihii ee baruurta badnaa. Waa qiso argagax badan.
Magaca dalka: Liberia
Dhalasho ilaa dhimasho: 6-May-1951 ilaa 9-Sept-1990
Previous PostMaxaad Ka Taqaan Qisada Saxaabigii Shinnidu Difaacday Maydkiisa, Magaca Saxaabiga Iyo Sababta Shinnidu U Difaacday Maydkiisa Next PostIntifaacsiga Dakhliga Khayraadka Dabiiciga ah (Shiidaalka & Macdanta)